Sida Loogu Hormariyo Qiimaha Beddelka Mobilada Walletka Dijital Ah | Martech Zone
Heerarka beddelaadda moobiilku waxay metelaan boqolkiiba dadka doortey inay adeegsadaan barnaamijkaaga moobiilka / websaydhka-moobiil ahaan wax laga beddelay, marka loo eego tirada guud ee kuwa la siiyay. Lambarkan ayaa kuu sheegi doona siduu ufiican yahay ololahaaga moobiilku iyo, iyadoo la fiirinayo faahfaahinta, waxa loo baahan yahay in la hagaajiyo.
Qaar badan oo kale ganacsiga e-ganacsiga guuleysta Tafaariiqleyda ayaa u arka faa iidadooda hoos u dhac marka ay timaado dadka isticmaala mobilada. Qiimaha ka tagida gaadhiga wax iibsigu waa wax lagu qoslo websaydhyada mobilada, waana taasi haddii aad nasiib u leedahay inaad dadka ka dhex eegto dalabku inuu bilaabo.
Laakiin sidee bay taasi ku suurtoobi kartaa, marka tirada dadka wax iibsada ee guurguura ay tobanaan milyan kor u kacdo sanad walba?
Qalabka mobilada ayaa ka soocmay si ka fog ujeedkoodii asalka ahaa. Haddii aan daacad nahay, wicitaannada iyo qoraallada ma aha shaqada aasaasiga ah ee aaladaha casriga ah ee dadka intiisa badan mar dambe. Aaladda mobilada ayaa noqotay fidinta aadanaha casriga ah waxayna u adeegtaa ku dhowaad ujeeddo kasta oo macquul ah, laga bilaabo xoghayaha nimble illaa gaadhiga wax iibsiga ee internetka.
Tani waa sababta aan u arko taleefanka gacanta oo kaliya mid kale oo aan ku filnayn. Barnaamijyada, boggaga iyo qaababka lacag bixinta waa in la waafajiyaa oo dib loogu cusbooneysiiyaa aaladaha si gaar ah. Mid ka mid ah hababka ugu isbeddelka badan ee lagu sameeyo macaamilada mobilada waa maareynta lacagta ewallet, taas oo ah mowduuca maqaalkan.
Hagaajinta Heerarka Beddelka Mobilada
Marka horeba, aan hal shay caddayno. Ganacsiga mobilada ayaa la wareegaya adduunka e-commerce si aad iyo aad u dhaqso badan. Muddo shan sano gudahood ah waxay arkeen indha indheyn ku dhow 65%, oo hadda haysata 70% wadarta guud ee ganacsiga elektaroonigga ah. Dukaameysiga moobiilka ayaa halkan jooga oo xitaa la wareega suuqa.
Waxa la yaab leh oo ku filan, ka tagista gaadhiga dukaamaysiga ayaa wali aad uga sarreeya bogagga internetka ee moobiilka marka loo eego isla waxyaabaha laga daawado kombiyuutarada miiska. Tani dhibaato weyn ayey ku tahay qof walba, gaar ahaan tafaariiqleyda yar yar iyo shirkadaha ku cusub ku-meelgaarka. Maxay tan u dhacdaa?
Marka horeba, waxaa jira wax iska cad. Bogagga internetka ee moobiillada badanaa si liidata ayaa loo hirgeliyaa, waana sabab wanaagsan. Waxaa jira aalado aad u tiro badan, cabbirro, daalacasharo, iyo nidaamyo hawlgal sameeya oo sameysanaya degel websaydh ah oo saaxiibtinimo leh oo u baahan qadar aad u tiro badan oo ilo iyo waqti ah.
Raadinta iyo marin habeynta degel-gacmeedka, oo leh tobanaan ama boqolaal alaabooyin wax iibsi ah waa mid aad u daal badan oo jahawareer leh. Xitaa marka macaamilku uu madax adag yahay oo uu intaas oo dhan marayo oo uu u sii gudbo isdiiwaangalinta, ma ahan qaar badan oo dareemayaasha dareema inay galaan soo galka hawsha lacag bixinta.
Waxaa jira xal ka xarrago badan. Waxay noqon kartaa waxoogaa qaali ah bilowga, laakiin xaqiiqdii waxay iska bixisaa si dhakhso leh. Barnaamijyadu waa xal aad uga wanaagsan aaladaha moobaylka. Waxaa loo sameeyay si khaas ah ujeedada isticmaalka mobilada waana wax aan laga fiirsan karin in la fiiriyo. Iyo, sida aan u aragno, barnaamijyada moobiilku waxay leeyihiin qiimo aad u hooseeya oo ka tagaya dukaamaysiga dukaammada iyo degellada gacanta.
Dukaanleyda ka soo guurtay degellada mobilada barnaamijyada waxay arkeen koror aad u badan oo dakhli ah. Aragtida alaabtu waxay kor u kacday 30%, walxaha lagu daray gaadhigii wax iibsanayay ayaa kor u kacay 85% guud ahaanna iibsiyada ayaa kacay 25%. Si fudud haddii loo dhigo, sicirka beddelka ayaa ka fiican iyada oo loo marayo barnaamijyada moobiilka.
Maxaa ka dhigaya barnaamijyadu inay rafcaan u yeeshaan isticmaaleyaasha waa habka ugu macquulsan ee loo maro, maxaa yeelay dhammaantood, waxaa loogu talagalay aaladaha mobilada. Daraasad laga sameeyay 2018 ayaa muujisay in macaamiisha badankood ay qiimeeyaan ku habboonaanta iyo xawaaraha, iyo sidoo kale suurtagalnimada in hal adeegsi lagu iibsado hal jibbaar iyo kaararka deynta.
Boorsooyinka dhijitaalka ah
Quruxda boorsooyinka dhijitaalka ah waxay ku jiraan fudeydkooda iyo amniga ku jira. Marka macaamil ganacsi la sameeyo iyadoo la isticmaalayo jeebka dijitaalka ah, wax xog ah oo ku saabsan iibsadaha lama soo bandhigi karo. Macaamilka waxaa lagu aqoonsan yahay nambarkiisa gaarka ah, sidaa darteed qofna howsha ma qaban karo macluumaadka kaarka deynta isticmaale. Xitaa kuma kaydsan taleefanka isticmaalaha.
Jeebka dijital ah wuxuu u shaqeeyaa wakiil ahaan inta udhaxeysa lacagaha dhabta ah iyo suuqa. Inta badan barnaamijyadan waxay bixiyaan qaab lacag bixin oo internetka ah oo loo yaqaan hal-guji-iibsi, taasoo la micno ah inaan loo baahnayn in la buuxiyo foomam kasta oo la bixiyo wax macluumaad ah - illaa iyo inta uu barnaamijku u oggolaanayo bixinta e-boorsada.
Qaar ka mid ah boorsooyinka casriga ah ee ugu caansan maanta waa:
PayPal Mid Taabasho
Sida aad arki karto, qaar ka mid ah waa OS-gaar ah (in kastoo badankood ay tijaabiyaan iskutallaabta iyo iskaashiga), laakiin badankood madaxbannaan boorsooyinka dhijitaalka ah ayaa laga heli karaa dhammaan meheradaha oo aad u jilicsan. Waxay bixiyaan taageero deyn iyo kaarar badan, iyo sidoo kale bixinta foojarka iyo taageerada cryptocurrency.
Haddii aad ka dhiseysid barnaamij bilaash ah si aad ugu haboonaato baahiyahaaga gaarka ah iyo dalabyadaada bilicsanaanta, ama aad u adeegsato barxad ganacsi e-ganacsi oo diyaar ah, is-dhexgalka jeebka dhijitaalka ah waa daruuri. Haddii aad isticmaaleyso barxad, inta badan shaqada adag horey ayaa lagugu qabtay.
Waxay kuxirantahay nooca ganacsigaaga iyo goobtaada, goobaha ganacsiga e-commerce ayaa kaa caawin doona inaad dooratid boorsooyinka elektaroonigga ah ee ugu fiican kooxdaada bartilmaameedka ah. Waxa kaliya ee kuu hartay inaad sameyso waa hirgelinta lacagahaas.
Haddii aad rabto inaad wax ka dhisto, wax caqli gal ah inaad kubilaabato xulashooyin kaladuwan oo ikhtiyaariga ah ee elektaroonigga ah ka dibna raac jaangooyada. Boorsooyinka dhijitaalka ah qaarkood ayaa laga yaabaa inay ka baahi badan yihiin kuwa kale, tanina waxay si ballaaran ugu xiran tahay goobtaada, alaabada aad iibineyso iyo da'da macaamiishaada.
Halkan waxaa ku yaal tilmaamo dhowr ah.
Aaway macaamiishaadii? Gobol walba wuxuu leeyahay waxyaabaha uu ugu jecel yahay, waxaadna u baahan tahay inaad caqli gal u noqoto tan. Xeer buste ah oo loogu talagalay tafaariiqda adduunka oo dhan waa PayPal. Laakiin haddii aad ogtahay in qayb badan oo ka mid ah iibkaagu ay ka yimaadaan Shiinaha, waa inaad ku dartaa AliPay iyo WeChat. Macaamiisha xiriirka Ruushka waxay doorbidaan Yandex. Yurub waxay leedahay saldhig weyn oo isticmaala Skrill, MasterPass iyo Visa Checkout.
Qalabkee ayaa ugu caansan? Eeg cabirkaaga. Haddii qayb badan oo ka mid ah kuwa wax iibsadaa ay adeegsadaan macruufka, waa caqli in lagu daro ApplePay. Isla waxay u socotaa Android Pay iyo Samsung Pay.
Waa imisa da'da macaamiishaadu? Haddii aad inta badan la macaamilayso dhalinyarada, oo ay ku jiraan boorsooyinka dhijitaalka ah sida Venmo waa adag tahay haa. Dad badan oo da'doodu u dhaxeyso 30-50 ayaa u shaqeeya meel fog ama kuwa madaxbanaan waxayna ku tiirsan yihiin adeegyada sida Skrill iyo Payoneer. Dhamaanteen waan ognahay in Millenials aysan aheyn kuwa ugu bukaanka badan, waana hubaal inay ka tagi doonaan iibsiga haddii aysan arkin xulashada lacag bixinta ee ay jecel yihiin.
Alaab noocee ah ayaad iibineysaa Badeecado kala duwan ayaa soo jiita maskaxyo kala duwan. Haddii khamaarku yahay cowskaaga, WebMoney iyo aalado la mid ah oo bixiya foojarro waa xulasho wanaagsan maaddaama ay horeba caan uga yihiin bulshada dhexdeeda. Haddii aad iibiso cayaaraha iyo badeecadaha dhijitaalka ah, ka feker hirgelinta boorsooyinka elektaroonigga ah ee taageera cryptocurrencies.
Haddii aadan hubin halka aad aadeyso, la hadal macaamiishaada. Qof kastaa wuu jecel yahay in la waydiiyo ra'yi, waxaadna tan ugu rogi kartaa adiga faa iidadaada adoo siinaya sahanno gaagaaban. Weydii iibsadayaashaada waxa ay jeclaan lahaayeen inay ku arkaan dukaankaaga. Sida aad u horumarin karto khibradooda wax iibsiga, iyo qaababka lacag bixinta ee ay dareemayaan inay ugu raaxeysan yihiin. Tani waxay ku siin doontaa jihada wanaagsan ee casriyeynta mustaqbalka.
Erayga ugu dambeeyay
Ganacsiga elektaroonigga ah qof walba wuu heli karaa. Waxay ka dhigtay iibinta badeecada qof walba meel kasta oo aad u fudud easy Aadna u adag isla waqtigaas. Sayniska iyo tirakoobka ka dambeeya suuqan waligiis isbedelaya ma sahlana in la isku xiro.
Maskaxda macaamiil celcelis ahaan waxbadan baa is badalay 10kii sano ee la soo dhaafay waana inaad ku dhaqantaa sida ku habboon. Baro oo la waafaji, maxaa yeelay xawaaraha ay adduunyada dijital ahi ku soo rogmaysaa waa mid maskax-jabisay.
Tags: amazon bixinlacag bixinta androidboorsada dijitaalka ahe-commercehagaajinta siciradaapp mobilecodsiga mobileolole moobiilganacsiga gacantaheerarka beddelashada mobiladasaamiga suuqa mobiladatafaariiqle guurguuragoobta mobilada vs barnaamijka moobiilkatirada dadka mobilada ka dukaameysanayafiisa bixinta
Nina waa cilmi baare farsamo iyo qoraa Naqshad Rush, Suuqa B2B oo isku xiraya magacyada hay'adaha. Waxay jeceshahay inay la wadaagto waaya-aragnimadeeda iyo nuxur macno leh oo dadka baraya oo dhiirrigelinaya. Danta ugu weyn ee ay ka leedahay ayaa ah qaabeynta webka iyo suuqgeynta. Waqtigeeda firaaqada, markay ka maqantahay kumbuyuutarka, waxay jeceshahay inay sameyso yoga oo ay baaskiil wadato.